10 Toerana fitsangatsanganana fianakaviana any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Toerana fitsangatsanganana fianakaviana any Eropa
Fotoana famakiana: 7 minitra(Last Nohavaozina: 12/03/2021)
Lohasaha maitso maitso, fomba fijery canyon lehibe, tora-pasika, na tanàna mahafinaritra, Eoropa dia feno toerana mahavariana ho an'ny tobin'ny fianakaviana. The 10 toerana fitobiana tsara indrindra any Eropa no mety indrindra fahavaratra fety, ary na dia ririnina aza. Izy rehetra dia voahodidin'ny fomba fijery mahafinaritra sy natiora, ary ny tena zava-dehibe dia natao ho an'ny fialan-tsasatra tsy hay hadinoina any Eropa.
1. Toerana fitsangatsanganana fianakaviana tsara indrindra any Austria: Tauren avo
Tanàna mitovy amin'ny angano, ahitra tsara tarehy, ary ny faritra Alpes, ny valan-javaboary Hohe Tauren no tampon'ny tampontsika 10 toerana fitobiana tsara indrindra any Eropa. Ohatra, iray amin'ireo toerana fitobiana tsara indrindra any amin'io faritra io ny Grossglockner izay tsy mijery ny tendrombohitra malaza Grossglockner ary io no avo indrindra any Aostralia.
Ankoatry ny, ny Innergschloss any East Tirol dia manana fomba fijery tsara indrindra avy amin'ny Alpes, Ka iray amin'ireo toerana tsara indrindra ho an'ny fiainam-pianakaviana sy sary. Another Hohe Tauren highlight is the 600-year-old larch forest of Zedlach, aiza no ahitanao toerana mahavariana ho an'ny a piknik ho an'ny fianakaviana.
Hamaranana, ny filasiam-pianakaviana ao amin'ny valan-javaboary Hohe Tauren dia ho traikefa tsy hay hadinoina ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Ambonin'izany rehetra izany, azonao atao ny manomboka ny fialan-tsasatra maintso any Aostralia amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana amin'ny fiaran-dalamby ICE-friendly.
2. Toerana fitsangatsanganana fianakaviana tsara indrindra any Frantsa: Lohasahan'i Dordogne
Ao amin'ny lohasaha Dordogne mahafinaritra, Ny Camping Le Pontet dia eo amoron'ny Ony Isle ary akaikin'ny chateaux Perigord tsara tarehy. Le Pontet, hahita tobim-pianakaviana kintana mahafinaritra 3 ianao miaraka amin'ny faritra fitobiana sy fanofana trano finday. Noho izany, raha misavoana anaty farihy kosa ny ankizy, afaka mankafy manjono na milentika masoandro ianao. Mifanohitra, Azonao atao ny mitsangatsangana mankany amin'ny toerana fijery ary miara-mankafy ny lohasaha Dordogne – Tonga lafatra ho an'ny sarin'ny fianakaviana.
Ny tobin'ny fianakavian'i Le Pontet dia ao amin'ny faritra mahafinaritra any Rhone-Alpes, akaikin'ny Ardeche Gorges tahiry voajanahary. Ary noho izany, hanana fotoana mahatalanjona ianao amin'ny fikarohana ny natiora dia, hetsika ivelany mahafinaritra toy ny fitsangatsangana sy bisikileta, ary mamono ny masoandro sy rivotra madio fotsiny.
Lyon mankany Nice miaraka amin'ny lamasinina
Paris ho tsara amin'ny lamasinina
Cannes mankany Paris miaraka amina lamasinina
Cannes mankany Lyon miaraka amina lamasinina
3. Family Camping Ty Nadan In Brittany, Frantsa
Amin'ny iray amin'ireo morontsiraka mahafinaritra any Eropa, Ty Nadan any Brittany no toeram-pilasiam-pianakaviana amoron-dranomasina tonga lafatra. Ny iray amin'ireo tombana amin'ny tranokalan'ny Ty Nadan dia ny hoe io toerana io dia manambatra ny natiora sy ny morontsiraka. Ary noho izany, afaka misafidy ianao na hitondra ny zanakao eny amoron-dranomasina, manamboatra fitoeram-pasika ary jereo ny filentehan'ny masoandro, mandeha lakana na fiakarana hazo. Rariny ity tranokala ity 20 minitra miala ny morontsiraka any Brittany.
koa, the campsite is great for a family vacation with small children and babies. Thanks to a baby gear pack and kids’ fialamboly amin'ny hariva. Ary noho izany, Azo antoka fa hanana fotoana fitobiana tsy hay hadinoina ao amin'ny morontsiraka malaza Brittany ianao.
4. Toerana fitobiana any Netherlands: Gelderland
Trano misy tulip mamelana sy Veluwe, Gelderland dia toerana fitsangantsanganana mahavariana ao Holandy. Ianao sy ny ankizy dia ho tia tanteraka ny valan-javaboary Veluwe ary bibidia, ary ny 200 zaridainan'i Appeltern.
Jutberg sy Ackerstate dia marina 2 amin'ireo toby maro any Gelderland, izay ahafahanao mametraka ny karajia na tranolanao. Holandy dia toerana mahafinaritra ho an'ny vakansy fianakaviana, satria satria be dia be ny toerana mahafinaritra hijerena zazakely na zazakely ary na dia ny tanora aza.
Bruxelles mankany Amsterdam miaraka amin'ny lamasinina
London mankany Amsterdam miaraka amin'ny lamasinina
Berlin mankany Amsterdam miaraka amin'ny lamasinina
Paris mankany Amsterdam miaraka amin'ny lamasinina
5. Toeram-pianakaviana tsara indrindra any Bavaria Alemana
Trano misy ny renirano Danube sy ny tanimboalobok'i Franconia, Toerana fitobiana mahafinaritra ho an'ny fianakaviana i Bavaria. Alao an-tsaina fotsiny ny fivoahana ny karavananao na ny lainy, mankamin'ny tanim-boaloboka sambatra, aorian'ny andro niainan'ny fianakaviana niainana.
Mandeha bisikileta an-tendrombohitra na mivezivezy eran'ny Ala Bavarian, mitady fiainana dia, lolo, ary vorona tsy fahita firy – Bavaria dia toerana fitsangantsanganana mahafinaritra. Ankoatry ny, ho hitanao fa feno farihy mahavariana ity faritra ity, Castle an'i Neuschwanstein ho an'ny tanora knights sy andriambavy, hamita ny fialantsasatra fahavaratra fianakaviana tonga lafatra.
6. Fialofana ankohonana ao anaty ala mainty
Avy amin'ny mason'ny vorona na lalina any anaty ala, ny ala mainty any Alemana dia iray amin'ireo tahirin-javaboary mahafinaritra sy mahafinaritra indrindra eto an-tany. Hahita tranokala maro any amin'ny faritra Black Forest ianao satria malaza be any Alemana ny lasy.
Ary noho izany, azonao atao ny misafidy ny mametraka ny karajia anao eo akaikin'ny tanàna taloha, na farihy tsara tarehy ary ny tendrombohitra. Ohatra, Campingplatz Weiherhof avy amin'i Titisee dia mety tsara amin'ny fialan-tsasatry ny fianakaviana miala sasatra, raha ny tobin'i Wolfach kosa dia mety ho an'ny fianakaviana an-tongotra sy bisikileta.
7. Toeram-pianakaviana any Tuscany Italia
Ny fitobiana any Tuscany no fialan-tsasatra ankafizinao indrindra. Ireo havoana maitso vita amin'ny ravina, tanim-boaloboka, fromazy eo an-toerana, ary ny truffles dia nahatonga an'i Tuscany ho lasa mpahandro sakafo any an-danitra. Misy koa pasta sy pizza ho an'ny ankizy mazava ho azy, raha mankafy ny lovia maro eo an-toerana ny ray aman-dreny.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, Tuscany dia manolotra hetsika mahafinaritra maro ho an'ny fianakaviana iray manontolo, toy ny valan-drano. Eto dia afaka mipetrapetraka ianao raha misitrika anaty rano ny ankizy, aorian'ny fitsangatsangananao any amin'ny tanàna manodidina, Pisa sy Sienna.
Amin'ny teny iray – tonga lafatra, Tuscany dia toby fitsangatsanganana fianakaviana mahafinaritra any Eropa, vatosoa miafina miafina tokoa.
8. Toerana fitsangatsanganana fianakaviana tsara indrindra any Suisse: Ilay farihy Swiss Alpine
Toeram-pisakafoanana mihaja na ao amin'ny lainy na fiara fitateram-bahoaka, manana ny Alpes Soisa mahavariana glamping toerana and budget-friendly family camping places. If you are planning family camping in the summer, avy eo ny toerana fitobiana Arolla any amin'ny Alpes Swiss dia tonga lafatra, satria avoavo any an-tendrombohitra no misy azy. Eto ianao dia hanana mahatalanjona ny fomba fijeriny, maripana mangatsiaka kokoa, ary be dia be tongotra lavitra lalana.
Na izany aza, raha tianao ny traikefa miala sasatra kokoa, avy eo milasy akaikin'ny sisin'ny farihy no mety. Voalohany, raha mafana, afaka nitsambikina tao anaty farihy fotsiny ianao. Faharoa, hanana fomba fijery mahafinaritra ianao, tsy mandeha lavitra loatra ny tobinao.
Ny fehiny dia manolotra toerana fitobiana maro samihafa ny Alpes Soisa. Manomboka amin'ny fialan-tsasatra mankany amin'ny fialantsasatra mavitrika, farihy na fahitana any an-tendrombohitra – Mahagaga daholo.
9. Toerana fitsangatsanganana fianakaviana tsara indrindra any Italia: Campsite Brione any amin'ny farihy Garda
Eo amin'ny lohan'ny farihy Garda, 4-kintana Camping Brione dia toerana fitobiana an-tsokosoko ao Italia. Mifoha amin'ny fahitana ny farihy, mitsambikina milomano, na misakafo hariva any ivelan'ny tranolay miaraka amin'ny iray amin'ireo toerana manintona indrindra eto an-damosinao any aoriana ny fianakaviana, no fomba fahandro mety indrindra ho an'ny fahafinaretan'ny mpianakavy.
Camping Brione manana 20 trano rantsan-kazo, ary 39 trano finday hofaina, herinaratra, ary fotodrafitrasa mahafinaritra, anisan'izany ny efitran-jaza. Raha ny fianakavianao no fanatanjahan-tena mavitrika, dia afaka manofa bisikileta ianao ary mandehandeha manodidina ny farihy sy ny tendrombohitra, na mankafy fanatanjahan-tena amin'ny rano. Etsy ankilany, azonao atao ihany koa ny mangatsiaka eo akaikin'ny pisinina eo amin'ny toerana fitobiana na amoron-dranomasina amin'ny farihy ary manana fotoam-pialan-tsasatra amam-pianakaviana.
10. Toerana fitobiana any Eropa: Verdon Gorge
Eo amin'ny sisin'ny Gorges du Verdon, any amin'ny toby fitobiana tanora sy namana, miaraka amin'ny fahitana farihy na any amin'ny toby fitobiana lafo vidy, ny filasiam-pianakaviana ao Gorges du Verdon dia tsy nampientam-po mihitsy. Gorges du Verdon dia iray amin'ireo tahiry voajanahary mahavariana indrindra eto an-tany, ary tonga lafatra ho an'ny tobin'ny fianakaviana amin'ny fahavaratra.
Misaotra ny akaiky azy akaiky amin'ny lohasaha sy ny farihy, maro ny hetsika fanatanjahan-tena amin'ny rano ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Ohatra, misy zaridaina sy dobo rano amin'ny ankamaroan'ny tobin'ny tobin'ny faritra, afaka miala sasatra eo akaikin'ny pisinina ianao. Mandritra izany fotoana izany, afaka mandeha mizaha amin'ny iray amin'ireo làlana fitsangantsanganana mahafinaritra ianao, ao amin'ny tahiry voajanahary mahatalanjona.
Raha fintinina – Ataovy fotsiny ny fikarohana ataonao Verdon Gorge filasiana sy famandrihana mialoha, satria toerana malaza amin'ny tobin'ny fianakaviana io, ary hanana fipoahana ianao.
Mahafinaritra an'i Marseilles Miaraka lamasinina
eto amin'ny Save A Train, Faly izahay manampy anao handamina ny dianao mankany 10 Toerana fitsangatsanganana fianakaviana tsara indrindra any Eropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny bilaoginay hoe "Toerana fitsangatsanganana fianakaviana 10 tsara indrindra any Eropa" amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamily-camping-destinations-europe%2F%3Flang%3DmgNyawang - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
filasiana CampingDestinations CampingDestinationsEurope Campingwithkids Familycamping Familytripeurope LuxuryCampingEurope lay